नवविवाहित सेलिब्रिटीको अनुभवः लकडाउनमा माया नै माया ! - Namaste Hetauda
घर मनोरन्जन नवविवाहित सेलिब्रिटीको अनुभवः लकडाउनमा माया नै माया !
२०७७, १३ असार शनिबार १७:४५
गत फागुन २९ गते नायिका आँचल शर्मा आफ्नो प्रेमी उदीप श्रेष्ठको घरमा दुलही बनेर भित्रिइन् । आँचल र उदीपको विवाहले मिडियामा निकै चर्चा पाएको थियो ।बैबाहिक जीवनमा प्रवेश गरेको दुई साता नपुग्दै कोरोनाको त्राशले गर्दा नेपाल लकडाउन भयो । त्यसयता आँचल र उदीप घरमा नै थुनिए । विवाहपछि हनिमुनमा जान नपाएका उनीहरु अहिले घरभित्रै एक–अर्कासँग समय बिताइरहेका छन् । लकडाउनका कारण घरभित्रै बस्नुपर्दा पनि गुनासो छैन उनीहरुको । यो समयमा एक–अर्कालाई राम्ररी चिन्न र बुझ्न पाएको आँचल बताउँछिन् । आँचलले भनिन्, ‘हामीलाई एक–अर्कालाई चिन्न हनिमुन जानु परेन । हामी घरमै बसेर रमाइलो गरिरहेका छौँ ।’
आफ्नो हनिमुनको विषयमा भने आँचल बेखबर थिइन् । श्रीमान उदीपले नै सबै कुराको बन्दोबस्त मिलाएका थिए । उनी श्रीमानले दिन लागेको सरप्राइज कुरिरहेकी थिइन् । केही समयलाई हनिमुन योजना रद्द भए पनि पछि फेरि जान सकिने आँचलले बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामी जाने भनेको ठाउँ वर्षमा दुई पटक मात्र खुल्छ रे । त्यहाँ जानलाई पहिल्यै बुकिङ गर्नुपर्ने छ रे । अहिलेलाई त समय सक्कियो । अब उदीपजीले अर्को पटक जाने भन्नुभएको छ ।’
लकडाउन आफूहरुको लागि फाइदाजनक नै भएको आँचलले बताइन् । यो समयमा अनेक तरहले प्रेम गर्न पाइएको उनको कथन छ । उनले भनिन्, ‘लकडाउन नभएको भए एक–अर्कालाई समय दिन नै गाह्रो हुन्थ्यो । तर, अहिले २४ घण्टा नै साथ बिताउन पाएका छौँ । त्यसमा खुसी छौँ ।’ आँचल र उदीपको जोडी घरको काममै व्यस्त हुन्छन् । कहिले भान्समा छिर्छन्, कहिले कोठा सफा गर्न लाग्छन् । आँचल भन्छिन्, ‘हामी जे काम पनि सँगै गर्छौँ । यसले यो गर्ने, यसले त्यो गर्ने भन्ने नै छैन । मैले काम गरिरहँदा उदीपजीले मलाई सयोग गरिरहनु भएको हुन्छ ।’
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न चितवनको माडी भोलिदेखि सिल